Another ThinGyan Bombs Blasts at MyitSone Dam Project | MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA
Another ThinGyan Bombs Blasts at MyitSone Dam Project	April 17, 2010
2 Responses to “Another ThinGyan Bombs Blasts at MyitSone Dam Project”
"အပြစ်မဲ့ အရပ်သားတွေ ဓားစားခံဖြစ်ရတဲ့ ဘယ်လို အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုမျိုးကိုမဆို ကျနော်တို့ကတော့ ရှုတ်ချပါတယ်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေရဲ့ ရလဒ်တွေ၊ ဘာတွေ ထွက်ပေါ် လာမလဲဆိုတာပဲ ကျနော်တို့ စောင့်ကြည့်သွားရမှာပါ။" (အမေရိကန် နိုင်ငံခြား ရေးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် P J Crowley က မနေ့က အခင်းဖြစ်ပွားပြီး နောက်မှာပဲ ပြောဆိုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။)အစိုးရ အနေနဲ့ဗုံးပေါက်တဲ့ သတင်းကို မြန်မြန် ဆန်ဆန်ထုတ်တာကို အစိုးရကို လက်ညိုး ထိုးချင်ကြ သေးတယ် ထွက်ပေါက်မရှာဘဲ ဖောက်ထွက် လိုသူတို့သူသေကိုယ်ရှင် တိုက်ပွဲဝင်လိုသူတို့အစိုးရကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့လုပ်နေသူတို့အသံတိတ် နေတာကို စဉ်းစားမိကြရဲ့ လား။ပြည်သူကို ကာကွယ်လိုတဲ့ အစိုးရ အနေနဲ့ဒီလို ဗုံးပေါက်တဲ့ သတင်းကို မြန်မြန် ဆန်ဆန်ထုတ် မှ တစ်ခြား မြို့ တွေ လဲသိပြီး ပြည်သူတွေ ကြိုတင် အကာအကွယ် ယူနိုင် သတိထားနိုင်မှာပေါ့။ ဗုံးပေါက်တာနဲ့ ခဏတွင်းမှာ ပြည်ပ မီဒီယာတွေကို ပြည်တွင်းက သတင်းပို့ ဖုန်းဆက်တာနဲ့ ပြည်ပက အကုန် သိပါတယ်။ အစိုးရ သတင်းမထုတ်ခင် အယ်လ်ဂျာဇီးယား က ညနေ ငါးနာရီခွဲမှာ ဗုံးကွဲတယ်၊ ဒါဇင်နဲ့ချီပြီး ထိခိုက်တယ်လို့ လွှင့်သွားတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မြန်မာပြည်သူ အကုန်တောင် မသိသေးဘူး။ အစိုးရကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပြီး တော်လှန်ဖို့လုပ်ဆောင် နေကြတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ ကတော့ ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုးကို ဘယ်ကန့် ကွက်ကြမလဲ။ သင်္ကြန်ဗုံးကွဲတဲ့ ကိစ္စကိုတောင် ဝမ်းနည်းကြောင်း ကြေငြာချက်တောင် မထုတ်နိုင် လောက်အောင် ဒီကိစ္စကို နှေးကွေး နေကြတာ ဘာသဘောလဲ။ အကြမ်းဖက်မူ နဲ့ အကြမ်းဖက်သမား နဲ့ တစ်သားတည်းလား။ အကြမ်းဖက်မူ နဲ့ အကြမ်းဖက် သမားတို့လုပ်ရပ် ဟာ မကောင်းဘူး၊ ရှုတ်ချဖို့လိုတယ်ဆိုတာ ကော်မန့် တွေ ဝေဝေဆာဆာ မပေးကျပါလား၊ ထွက်ပေါက်မရှာဘဲ ဖောက်ထွက် လိုသူတို့သူသေကိုယ်ရှင် တိုက်ပွဲဝင်လိုသူတို့အသံတိတ် နေကြပါလား။ မီဒီယာ တွေကလဲ အင်တာဗျူး မလုပ်ကျတော့ဘူးလား
How much ve u got for this post, Tun Lin? No Brain. Dumpfull.